Apple Inoburitsa Beta 4 yewatchOS 4.3 yeVagadziri | Ndinobva mac
Maminitsi mashoma apfuura, Apple yakaisa mumaoko evanogadzira iyo watchOS 4 beta 4.3 yevagadziri. Mune ino nyowani beta vhezheni tinowana izvo zvakajairika kugadzirisa uye kugadzirisa bug, uye inosvika mavhiki maviri mushure mekuvhurwa kweshanduro yapfuura, senge dzese dzimwe shanduro dzakaburitswa nezuro kune vanogadzira macOS uye iOS.
Mune ino kesi yechina beta vhezheni inowedzera kumwe kuvandudza pamusoro mamiriro emanheru nemaonero ewachi akatwasuka, izvozvi zvaitwa zvakatwasuka apo kurodha pasi. Mupfungwa iyi, kumwe kuvandudzwa kwakawedzerwawo kuchimiro chewachi uku uchirodha uye iyo vhezheni 4.3 inouya nenhau dzinonakidza.
Apple haidi kuwedzera shanduko dzakawandisa kamwechete mushanduro nyowani uye inochengetedza tsamba dzemwedzi waChikumi, asi chero nhau, zvisinei diki, maererano nekushanda kwe smartwatch inogamuchirwa nguva dzose. Zvakare sekutaura kwedu kuti pane shanduko mune inoenderana kubva kune yekutanga ye beta vhezheni 4.3 yakaburitswa, muhusiku modhi, mune imwe data rezviitiko, mubatanidzwa webhatiri uye iyo nyowani nyowani paunenge uchiisa wachi pacharge.
Pane idzi beta vhezheni zviri nani kuti ubve munzira yekudzivirira matambudziko, uye izvo ndezvekuti paApple Watch hapana sarudzo dzekumisikidza vhezheni yapfuura kana wagadzirisa. Mupfungwa iyi, chero kukanganisa kunogona kuuraya mushandisi, zvichisiya mudziyo usingashandisike, saka kurudziro sezvagara iri gara kunze kweshanduro idzi dze beta uye rega vagadziri vaedze ivo uye uwane isu nhau dzako. Kune iyo Apple Watch hapana yeruzhinji beta shanduro dzevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa beta 4 yewatchOS 4.3 yevagadziri